पाहुनालाई स्याउ कोसेली- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
पाहुनालाई स्याउ कोसेली
भाद्र २४, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
रुकुम पश्चिम — छिमीका धनबहादुर बोहरा हरेक दिन त्रिवेणी बजार झर्छन् । केही दिनयता उनको दैनिकी फेरिएको छ । बिहान छिमीबाट त्रिवेणी झर्नु र बेलुका घर उक्लनु । बगैंचामा लटरम्म स्याउ फलेपछि बिक्रीका लागि उनी त्रिवेणी झर्छन् ।
दुःख र लगानी गरेर फलाएका स्याउ बिक्री गर्ने आशाले हरेक दिन त्रिवेणी बजार झरे पनि उनको स्याउ बिक्री हुँदैन । ‘अर्को बजार लैजानसक्ने ठाउँ छैन,’ बोहरा भन्छन्, ‘बिक्री भइहाल्छ की भनेर बजार आउँछु, कहिल्यै मन खुसी हुनेगरी स्याउ बिक्दैन ।’ त्रिवेणी बजारका अधिकांश स्थानीय छिमीतिरकै छन् । त्यसैले अधिकांशले गाउँमा फलेको स्याउ किनेर खाँदैनन् ।
छिमीका ४३ घरधुरीले व्यावसायिक स्याउखेती गरिरहेका छन् । तर बिक्री गर्न बजारको समस्या छ । ‘सबैका घरमा स्याउ फलेको छ, धेरै बोट हुनेका एक हजार र कम बोट हुनेका एक सय बोट स्याउ छन्,’ अर्का स्याउ किसान मोती रोकाले भने, ‘स्याउ छ, बजार छैन हामीले फलाएका स्याउ खेर गइरहेका छन् ।’ गाउँमा सबैभन्दा बढी हजार बोट स्याउ लगाउनेमा रोका पनि पर्छन् ।
समुद्र सतहदेखि २ हजार ६ सय मिटर उचाइमा किसानले स्याउ लगाएका छन् । एकापट्टि गाउँ छ भने अर्कोपट्टि स्याउ बगैंचा । बिना कुनै औषधि र विषादी प्रयोगबाट फलेका अर्ग्यानिक स्याउले यो वर्ष मात्रै होइन अघिल्ला वर्षदेखि बजार पाएको छैन । स्याउ फल्ने र बिक्री गर्ने सिजन यही हो । यो बेला गाडी चल्दैनन् । ढुवानी पनि महंगो हुँदा स्याउ बिक्री नभएको रोकाले बताए । स्याउले बजार पाए छिमीका सबै परिवार स्याउबाट पालिनसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
छिमीका केहीले मात्रै त्रिवेणी बजारसम्म स्याउ बिक्रीका लागि पुर्‍याउछन् । बिक्री नहुने भएपछि सबैले त्रिवेणी ल्याउँदैनन् । स्याउ बोटबाटै झरेर कुहिन्छ । छिमीका प्रताप बस्नेतले अघिल्लो सिजनमा ७० हजार रुपैयाँको स्याउ बिक्री गरेका थिए । ‘यस वर्ष स्याउ धेरै फलेको छ, तर आम्दानी बढ्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बजार नभएपछि स्याउ बढे पनि आम्दानी बढ्ने ठाउँ छैन ।’ उनका अनुसार छिमीमा, रोयल, रेड रोयल र डेलिसियस जातको स्याउ फलेको छ ।
आफन्त र भेटघाटका लागि पाहुनालाई पाहुर (नासो) का रुपमा स्याउ दिएर पठाइन्छ । ‘पाहुना आउनेले बोक्नसक्ने जति लैजान्छन्,’ स्थानीय विष्णु बोहराले भने, ‘बिक्री नभएर बिग्रनुभन्दा पाहुनालाई कोसेलीको रूपमा स्याउ दिने गरेका हौं ।’ उनका अनुसार सोही वडाको होली र ५ नम्बर वडाको गैरीपातलमा पनि स्याउ फल्ने गरेको छ । सबैतिरका किसानले बिक्री नहुने समस्या भोग्दै आएका छन् ।
आठबीसकोट नगरपालिका प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले उत्पादित स्याउ बिक्रीका लागि नगरपालिकाले बजार खोजिरहेको बताए । ‘औषधि र विषादीको प्रयोग नभइ फलेका अर्गानिक स्याउ बिक्रीका लागि बजार खोज्न नगरपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको छ,’ केसीले भने, ‘बिक्री नभएका स्याउ नगरपालिकामा खुलेको कर्णाली वेभरेज उद्योगमार्फत जुस बनाएर भए पनि किसानलाई उत्पादनको मूल्य दिइन्छ ।’ उनले स्याउ उत्पादन थप बढाउन र अझै गुणस्तरीय बनाउन योजना निर्माण गरिरहेको जनाए । उनका अनुसार बगानैपिच्छे प्राविधिक खटाउने नगरपालिकाको तयारी छ ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०९:५८
ज्वरोले बारेकोटकी एक बालिकाको मृत्यु
भाद्र २४, २०७६ भीमबहादुर सिंह
जाजरकोट — दुई सातादेखि भेरी नगरपालिकालगायत गाउँ/नगरमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । भाइरल ज्वरो फैलिएपछि गाउँका स्वास्थ्यचौकी र सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको फैलिएपछि जाजरकोट अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ ।
भाइरल ज्वरोको कारण बारेकोट गाउँपालिका ६, ताँसीधुमकी १४ वर्षीया आशा विकको आइतबार मृत्यु भएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।
बालिकाको जाजरकोट अस्पतालमा उपचार हुन नसक्दा थप उपचारका लागि नेपालगन्ज लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो । मृतक बालिका एक सातासम्म भाइरल ज्वरोबाट थलिएकी थिइन् । बालिकालाई ६ दिनसम्म जाजरकोट अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो ।
भेरी नगरपालिका, जुनीचाँदे, बारेकोट गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढिरहेका छन् । दैनिक १ सय ५० बढी भाइरलका बिरामी जिल्ला अस्पतालमा आउने गरको डा. केशरजंग कार्कीले बताए । भाइरलबाट बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएको डा. कार्कीले जानकारी दिए ।
‘ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुनेलगायत लक्षणका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मौसम परिवर्तन, दूषित पानी, बासी खानेकुरा र सरसफाइको कमीले भाइरलको प्रकोप फैलिएको हो ।’ भाइरलले रोगविरुद्ध लड्ने शक्ति कमजोर भएका र दम तथा श्वासप्रश्वासका बिरामीलाई बढी समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
ताजा, तातो र पोषिलो तथा झोलिलो खाना खाने, आराम गर्ने, उमालेर पानी पिउने, सरसफाइमा ध्यान दिनेलगायत सुझाव बिरामीलाई दिइएको डा. कार्कीले बताए ।
अस्पतालमा औषधि अभाव हुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या आएको उनी बताउँछन् । अस्पतालमा पुरानो स्टक औषधि सकिएको छ भने नयाँ खरिद गर्न बजेट छैन ।
दुर्गम गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदा बिरामीले उपचार पाउन नसकेको बारेकोट ८, का रामचन्द्र उपाध्यायले बताए । ‘भाइरल प्रभावित बिरामीलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लैजादा न औषधि पाइन्छ, नत स्वास्थ्यकर्मी फेला पर्छन्,’ उनले भने, ‘गाउँ/नगरपालिकाले चालु आवका लागि औषधि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समस्या भएको हो ।’ उनका अनुसार बिरामी निजी मेडिकलको महँगो औषधि किन्न बाध्य छन् ।
उत्पादनै नहुने क्षेत्रमा कृषि सडक
रारा विमानस्थलमा उडान सुचारु
पहिरोले ट्यांकी र पाइप बगाएपछि खानेपानी अभाव
आरोप–प्रत्यारोपले गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प
कर्णाली अस्पतालमा चिकित्सकसहित ४ स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण
कर्णालीको बजेट पारित